NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းကိစ္စသုံးရပ်နဲ့ ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အဓိကတာဝန် – MoeMaKa Burmese News & Media
← မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်အတွက်..မိုးမခ မဟာသင်္ကြန်စာ
မနန်းဝိုးဖန် စသုံးလုံးတွင် မိမိကိုယ် သတ်သေသွားသည်ဟု ယူဆကြောင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ပြော →
May 31, 2014 June 1, 2014 Aung Htet
6 thoughts on “NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းကိစ္စသုံးရပ်နဲ့ ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အဓိကတာဝန်”
ကျုပ်သူငယ်ချင်းတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ အများအပြားဘဲ အားလုံးက စစ်ဗိုလ်တွေပါ ယခုလက်ရှိမှာတော့ နေပြည်တော် ရန်ကုန် မော်လမြိုင် ထားဝယ် ဘက်တွေမှာ တာဝန်ကျတယ် ။မကြာသေးတဲ့အချိန်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ. စကားဖောင်ဖွဲ.မိတယ် ။သူတို.စကားတွေမှာတော့ အထက်အမိန်. အထက်အမိန်. တွေကြီးကြားနေရတယ်။ ဒီတခါ ဆုံဖြစ်ရင် သူတို.တွေကို မေးရမယ် အထက်အမ်ိန်. ဆိုတာ ဘယ်သူ.ကိုပြောတာလဲ ဦးသိန်းစိန်လား ဦးသူ၇ရွေမန်းလား ဒါမှမဟုတ် မင်းအောင်လှိုင်လား သူတို.အမိန်.ပေးတာ ဘာအတွက်လည်း ဘာလုပ်ဖို.လည်း ဆန်းစစ်ရမယ် မှန်တဲ.အမိန်.ဆိုရင် လက်ခံ ပြည်သူအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ အမိန်.ဆို၇င်ငြင်းရမယ် ဒါဟာ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်တာမဟုတ်ဘူး အချို.သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ မိမိ၏ အသက် စည်းစိမ် ရာထူး တွေအတွက် အောက်လက်ငယ်သား စစ်ဗိုလ်တွေကို အထက်အမိန်.ဆိုပြီး အမိန်.ပေးစေခိုင်းနေကြတယ် လွန်သွားတဲ့အနှစ် ၅၀ -ကိုမျှော်ကြည့်ပါ နေ၀င်း သန်းရွေ ခင်ညွန်.ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ရဲ. အထက်အမိန်.ဆိုပြီး တပ်မတော်ကို လက်ကိုင်ဒုတ်တဖွယ် မိမိ၏ ရာထူး စီးစိမ်အတွက် အသုံးချခဲ့လို. ပြည်သူတွေ ဒုက်ခ ဆင်းရဲ ပင်လယ်ဝေခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။ ကဘာ့ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပါ အနည်ဆုံး အရှေ.တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူ မလေးရှား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတောင် စစ်တပ်က သမတ လွှတ်တော် ကိုကျော်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတွေ.ရမယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ အထက်အမိန်.ဆိုပြီး အောက်ကစစ်ဗိုလ်တွေအနေနဲ. တိုင်းပြည်ကို လက်လွတ်စပယ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ဒီတခေါက် ကျုပ်သူငယ်ချင်း စစ်ဗိုလ်တွေနဲ. တွေ.တဲ့အခါ ပြောဖြစ်အောင် ပြောရမယ်။ သူငယ်ချင်းစစ်ဗိုလ်များနဲ. စစ်တပ်တခုလုံးရွင်လန်းချမ်းမြေ.ပါစေ။
Ba Chit says:
DSA means Dominate Service Academy
တပ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် အနေနဲ. အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော် ကောင်းစားေ၇းနဲ. တပ်မတော် သမိုင်း ကောင်းေ၇း အတွက် သော.ချက် အကျဆုံးသူ ပါ ။ တပ်မတော်ကို လမ်းမှန်ေ၇ာက်အောင် ထိမ်းကြောင်း ပေးပီး မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး မျှော်လင်.နေတဲ. အနာဂတ်ကောင်းတွေ ကို ဖန်တီးပေးခဲ.တယ် ဆိုတဲ. သမိုင်းကောင်းကို မော်ကွန်းထိုးပါ စေလို. အားလုံးက ဆုတောင်း၇င်းစောင်.နေ ပါတယ်။